Rymdkapsel, mutambo wezano wauchada | IPhone nhau
Rymdkapsel, mutambo wezano wauchada
Nacho | | IPhone mitambo
Rymdkapsel izita rakaomarara rerunako zano mutambo iri muApp Store. Inowanikwa ye iPhone kana iPad, iri zita nderimwe remakanakisa andakaedza mumavhiki apfuura uye kunyangwe nzira yaro ingaita senge yakaoma pakutanga, mune imwe nyaya yekuyedza kwakawanda isu tichatora masimba kuti ave vapenyu vechokwadi.
Chii chiripo chekuita muRymdkapsel? Pona huwandu hukuru hwe muvengi mafungu zvinogoneka, chimwe chinhu chatinofanirwa kuronga chirongwa chinodzivirira uye chekuvandudza. Kune izvi isu tine rubatsiro rwakakosha rweMaminion maviri (havasi ivo vanopenga maMinion auri kufungidzira) ayo isu atinogona kutanga nawo ekutanga chimiro chehushe hwedu.
Ichi chimiro chakakosha chinoumbwa nezvinhu zvidiki zvinotitendera tizvidzivirire uye tiwedzere guta redu yevashandi, chimwe chinhu chakakosha kana isu tichida kuvaka zvakawanda munguva shoma uye kusimbisa chinodzivirira pane vavengi. Senge mune chero mutambo wezano, muRymdkapsel tine zviwanikwa zvinoverengeka zvinovakirwa nezvivakwa zvese, saka zvakakosha kuzvibata nemazvo.
Achifunga nezvenyaya yezvivakwa, Rymdkapsel ane chete zvivakwa zvinomwe zvine chimiro chiri kuchinja, kutora kutaridzika kwematare kubva mumutambo Tetris. Izvi zvinodaro nekuti manejimendi manejimendi akakosha mumutambo sezvo uchishomeka, pamusoro pezvo, zvivakwa zvinogona kungovakwa chete kana zviri padyo nemakoridho maMinion aanogona kufamba, zvikasadaro, isu hatizokwanisa kuzviisa. Sezvo waona iyi poindi, mashandiro echivako chimwe nechimwe muRymdkapsel anotevera:
Horo: Sezvandamboreva, ndiyo nzvimbo inogona kufamba maMinoni.
Anoburitsa: ine basa rekuburitsa imwe yezvakakosha zviwanikwa zvekuvaka, nenzira, ino sosi inogumira.
Reactor: inogadzira simba, kuve wechipiri sosi inodiwa kuvaka.
Garden: vanopa izvo zvatichazoshandisa mukicheni.
Cooking- Tichishandisa izvo zvinopihwa kubva mubindu, tinogadzira yechitatu neyekupedzisira zviwanikwa zvinodiwa mumutambo.
Armament: ndiyo nzvimbo iyo maMinion anodzivirira humambo hwedu. Imba yega yega yekudzivirira ine nzvimbo yemaminoni maviri.
Makota: Ivo vanowedzera huwandu hwevaMinioni, vachigadzira vanosvika maviri maMiyoni pachikamu uye vachida zvikamu zvina zvekudya.
Kujekesa chimiro chakakosha, tinogona kupa akasiyana mabasa kune wega Minion uye kana vavengi vasvika, vaendese kunzvimbo yekudzivirira kuti vadzivise kutiuraya. Mutambo unopera kana vavengi vauraya vese maMinion.
Ini ndakakanganwa kutaura kuti pamepu iwe yaunowana mana totems. Basa rayo ndere kuferefetwa neMaminion kuitira kuti vawedzere kumhanya kwavanofamba.
Rymdkapsel mutambo unodhura asi zvikorekedzo uye kuyedza kwega kwega kunowanzotora pakati pemaminitsi makumi matanhatu nemakumi mapfumbamwe Zvichienderana nehunyanzvi hwedu kana izvo zvatinoisa panjodzi, isu tinogona zvakare kumbomisa mutambo uye kuenderera nawo pane imwe nguva kana tichida. Pasina kupokana, zita rekutarisa wezhizha rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Rymdkapsel, mutambo wezano wauchada
Junk Jack X, iko kwekugadzira mitambo kunorarama
ZvirinaniWiFi7: tweak yekuvandudza kutonga kwewifi yekubatana kwako